တော်ဝင်အိန်ဂျယ် အေရီရယ်၏ တန်ခိုးအစွမ်း -လင်းညို့တာရာ-
အေရီရယ်တမန်တော်မြတ်သည် ၁၇ ရာစု မှတ်တမ်းများတွင်လည်း ကောင်း၊ ဂျူးဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ နှစ်ခု ရောနှောထားသော Judeo - Christian ဘာသာ တရားများတွင်လည်းကောင်း အေရီရယ်အကြောင်း ကို ဖော်ပြထားခဲ့ပီးပါပြီ။
သဘာဝတရားရဲ့ အကြီး အကဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအဖြစ် ရောမြေအောက်လောက ကြီးရဲ့ တရားညီမျှခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ကြဉ်းပေး သော ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းခေတ် ကာလကို ရောက်တဲ့အခါ မကောင်းတဲ့သူများကို ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ပေးတတ်တဲ့ တမန်တော်ဆိုပြီး နာ မည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ အေရီရယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ နာမည်ကျော် ပြဇာတ်ရေးဆရာကြီး ရှိတ်စပီး ယားရဲ့ ပြဇာတ်တစ်ခုထဲမှာ သဘာဝ ဝိညာဉ်တော် တစ်ပါးအဖြစ် တင်စားဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြဇာတ် ထဲမှာ အေရီရယ်တမန်တော်က မှော်ဆရာကြီး ပရို စပဲရိုကို သူမရဲ့လျှို့ဝှက် အသိတရားများရဲ့ ထက်ဝက် ကို ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး တင်ဆက်ထားတာလည်း ရှိပါတယ်။
သူမသည် တမန်တော် ရာဖိုင်ရယ်နှင့် နီးနီး ကပ်ကပ်ရှိတဲ့ ကုသခြင်းစွမ်းအင်ကို အထူးပိုင်ဆိုင် သော တမန်တော်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအား ဖြင့် ငှက်ကလေးများ၊ ငါးများ စတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေး များကို ပိုမိုကူညီပေးတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တမန် တော် အေရီရယ်က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ အဖြစ်အပျက်စွမ်းအင်များနှင့် ပတ်သက် ပြီး တမန်တော်အားလုံးထဲမှာ အမြင့်မြတ်ဆုံး ဖြစ် တာကြောင့် ကမ္ဘာအပါအဝင် ဂြိုဟ်များအားလုံးကို လည်း အစဉ်အမြဲ စောင့်ကြည့်နေသူဟု ယုံကြည် ကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းများကြောင့် အေရီရယ် တမန်တော်မြတ်သည် သဘာဝဆိုင်ရာအရာများကို စောင့်ရှောက်ပေးတတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ မင်း သာ ကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ သဘာဝတရားများနှင့် တိရစ္ဆာန်များကိုသာ ကြင်နာ သနားစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် တော့ တမန်တော် အေရီရယ်က သိရှိပြီး သင်လို အပ်တဲ့ အကူညီကို သူမက ကူညီပေးတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ သဘာဝဆိုင်ရာ အရာရာ တိုင်းကို တမန်တော်အေရီရယ်က တနည်း မဟုတ် တစ်နည်း မပျက်ဆီးရလေအောင် အမျိုးမျိုးအစီ အစဉ် ချမှတ်ပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် ချပေးလေ့ ရှိပါတယ်။
သတ္တိရှိလာဖို့ ရဲရင်လာဖို့ အာရုံစုစည်းနိုင်ဖို့ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ယူ ဆောင်ပေးပါတယ်။ သူမကို အကြားအမြင် အာရုံ ကောင်းသူ၊ သရုပ်အမှန်ပြဆိုနိုင်သောသူ၊ စည်းစိမ် ဥစ္စာများ ယူဆောင်ပေးသူ ဖြစ်ပါသည်။ သူမရဲ့ အရောင်ကတော့ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ခေါင်းမှာ ပန်းရောင်ရှိသော Rose Quartz ကို ဆင်ယင်ထားပါတယ်။ သူမက ဆေးဆရာတွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ အလုပ်သမား၊ သဘာဝဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များကို ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကူညီပေးရင်း ပတ်ဝန်းကျင်က မိမိ အပေါ်ကို ချစ်ခင်နေရင်တော့ သူမရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ သူမရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်က ခြင်္သေ့နတ်ဘုရား ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားနာမည်များ - Auriel, Arael, Ariael
စိုးမိုးသောအရောင် - ပန်းနုရောင်၊ အဝါနုရောင်၊ သက်တံရောင်နှင့် ရွှေအိုရောင်
စောင့်ရှောက်သောဌာနေ - သဘာဝတရား
စိုးမိုးသောချက္ကရာ - နှလုံးချက္ကရာ
စိုးမိုးသောဓာတ်သဘော - လေ၊ ရေ၊ မီးနှင့် မြေ
စိုးမိုးသောအရပ်မျက်နှာ - မြောက်အရပ်
စိုးမိုးသောဘူမိကျောက်များ - သူယောင် ကျောက် (Rose quartz)၊ နီလာခရမ်း၊ မြ၊ ကျောက်စိမ်း၊ လကျောက်၊ ရွှေ နှင့် ငွေ
စိုးမိုးသောအပင် - အပင်အားလုံး
စိုးမိုးသောသတ္တဝါ - သတ္တဝါအားလုံး
အမှတ်တံဆိပ် - သဘာဝမြေကြီးနဲ့ သက် ဆိုင်သော တံဆိပ်အားလုံး
သက်ဆိုင်သောအဆီများ - မုန့်လာဥ အစေ့အဆီ၊ စံပယ်ဆီ၊ ဗေဒါပွင့်အဆီ နှင့် စန္ဒကူးဆီ
အေရီရယ်တမန်တော်နှင့် ပတ်သက်သော အစီ အရင်များ
အေရီရယ်တမန်တော်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ထူး ခြားစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အစီအရင်တွေ အများ ကြီး ရှိပါတယ်။ လက်ရှိဖော်ပြထားသော ပုံတော်ကို ရောင်စုံပရင့် (Print) ထုတ်လိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် ပါ သောပုံအား ဖြတ်တောက်လိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် ကာလာမိတ္တူဆွဲလိုက်ပါ။ ထိုကတ်ပြားကို အောက် တွင် ဖော်ပြထားသော အေရီရယ်တမန်တော် ဆု တောင်းဂါထာဖြင့် ရွတ်ဆိုပြီး ကျောင်းဆရာ၊ အလုပ်သမား၊ ဆေးဆရာများ အဆောင်ပြုလုပ်ထား နိုင်ပါသည်။ သဘာဝတရားနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလုပ် လုပ်နေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး အဆောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတမန်တော်ကတ်ကို အဆောင် ပြုလုပ်ထားသူသည် သဘာဝတရားကြီးကို မိမိရဲ့ အသက်နဲ့ထပ်ထူ ချစ်မြတ်နိုးရပါမည်။ အကြောင်းမဲ့ ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုရပါ။ မိမိအိမ်တွင် တိရစ္ဆာန်များ မွေးထားပါကလည်း ထိုတိရစ္ဆာန်များကို ကိုင်တွယ် ကာ အောက်ပါဆုတောင်းရွတ်ဆိုပီး တိရစ္ဆာန်လေး မွေးထားပါကလည်း ထို တိရစ္ဆာန်များကို ကိုင်တွယ်ကာ အောက်ပါ ဆုတောင်း ရွတ်ဆိုပြီး တိရစ္ဆာန်လေးများကို အကာအကွယ် ပြု လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Archangel Ariel, I call upon your presence now.
I desire to help heal the worlds environment,
and I ask you to give meaDivine assignment for this important mission.
I ask that you open the way and support me in this endeavor.
Thank you for the joy that this mission brings to me and the world.
အချစ်ရေးပြသနာများ အခက်အခဲ တွေ့ရ ပါက ကြာသပတေးနေ့ နေထွက်သည့်အချိန်တွင် တမန်တော်ပုံကို ကိုင်တွယ်ကာ အောက်ပါဂါထာအား ရွတ်ဆိုရပါမည်။ အောက်ပါမန္တန်ကို အင်္ဂလိပ်လို ရွတ်ဆိုပြီး ဆုတောင်းရမည် ဖြစ်တာကြောင့် အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ပြောမှပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Archangel Ariel, I am struggling with the following relationship issues and I would love for you to step in so peace and harmony can be created by using your gifts of divine magic (share you challenge). You have the ability to bring harmony and balance into any situation and I trust you will work your miracles so we can experience (state what you desire to feel when all is resolved). Thank you.
မိမိတွင် အနှောင့်အယှက်များရှိပါက အကာ အကွယ် ရရှိစေရန်အတွက် အောက်ပါ အကာ အကွယ် ဂါထာကို ပရင့်ထုတ်ထားသော တမန်တော် အေရီရယ်ပုံကို ကိုင်ဆောင်ကာ ရွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Archangel Ariel, I see that Mother Nature needs some healing and balance.
Please watch over all of her inhabitants and see that they are protected from all harm.
Please bring healing to the earth and remind me
how I can play my part in helping and healing Mother Nature. .
တမန်တော်သည် သဘာဝတရားကို ချစ် မြတ်နိုးသော တမန်တော်ဖြစ်တာကြောင့် သဘာဝ တရားကြီးနှင့် ပတ်သက်သော အရာအားလုံး သူမနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သူမသည် ဓာတ်သဘောအား ဖြင့် လေဓာတ်ကို စိုးမိုးပြီး မြောက်အရပ်ကို ကိုယ်စား ပြုပါတယ်။ သန့်စင်သော မြင့်မြတ်သော ဓာတ် ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တာကြောင့် ပြင်းထန်သော အင်အား တချို့လည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပေးသည်။ အေရီရယ်ဟာ ကံတရားတို့ရဲ့ တမန်တော်လည်း ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ ယူရီရယ်တမန်တော်နဲ့ အလားစွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ အချို့သော အနောက်တိုင်းမှော်ပညာရှင်တွေက ယုံ ကြည်မှုရှိပါတယ်။ အချို့ ကျမ်းဂန်တွေမှာတော့ အေရီ ရယ်ကို ယောကျာ်းအသွင်ရော မိန်းမအသွင်ရော ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများစုကတော့ အေရီရယ်ကို မဓာတ်သဘောပဲ ဆောင်ယူပြီး မိန်းမ ပုံစံ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ မှော်ပညာရှင်တွေနဲ့ အေရီ ရယ် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုပါက နှလုံးချက္ကရာ ကို အားပြုပြီး သူမနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
အေရီရယ် ကူညီနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများ မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
- အမြင်ဓာတ် အကြားဓာတ်ထက်မြက်နိုင် စေဖို့၊
- သဘာဝတရားကြီးသည် ညီမျှစွာ ရှိနေဖို့၊
- အရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံနိုင်စေဖို့၊
- အောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့ (အချစ်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ထီထွင်နိုင်စွမ်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး)
- ပျောက်ဆုံးနေသော ရတနာပစ္စည်းများ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး
- သဘာဝတရားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကို ရှာ ဖွေသုတေသနလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး
- မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်တွင်းစိတ်စွမ်းအင်များ ထက်သန်စေနိုင်ဖို့
- မိမိစကားတစ်ခွန်တည်း ပြီးစေဖို့ (စကား အောင်ဖို့)
- အတွေးအခေါ်အသစ်များ ရရှိစေဖို့
- မိသားစု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် ယဉ် ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့ ကံတရားကို ပြုပြင်ဆေးကြောနိုင်ဖို့
- အကြောက်တရားကင်းရှင်းစေပြီး ရဲစွမ်း သတ္တိရှိဖို့
ထို့ကြောင့် မိမိတွင်ရှိသော အခက်အခဲများ အတွက် တမန်တော် အေရီရယ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ကာ တောင်းဆုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆောင်ကတ်လည်း ဆောင်ထားခြင်းဖြင့်လည်း အချို့သော အခက်အခဲ များကို ပြေလည်စေနိုင်ပါတယ်။
တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် တမန်တော်အေရီရယ်ဖြင့် တွေ့ ဆုံခြင်း (သို့) တရားထိုင်ပြီး မိမိသတင်းစကားအား ပြောဆိုခြင်း
စားပွဲလေးတစ်လုံး လိုအပ်ပါမယ်။ အနီ ရောင် ဖဲကြိုးလေးတစ်ခုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုစားပွဲလေးပေါ်တွင် အေရီရယ်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို တင်ပါ။ အရှေ့တွင် သလင်းကျောက် ခေါ် နှင်းဆီသလင်း ကျောက်တုံးချပါ။ ဖယောင်းတိုင်အဝါရောင်ကို ထွန်း ညှိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စံပယ်အနံ့အမွှေးတိုင်ကို ထွန်းညှိထားပါ။ မိမိပြုလုပ်သောနေရာသို့ အခြား မည်သူမှ မဝင်ရောက်စေရပါ။ အချိန်ကာလသည် ကြာသပတေးနေ့ နေစတင် ထွက်သောအချိန် ဖြစ်ရ ပါမည်။ ထိုအချိန်တွင် အစီအရင်ကို စတင်ပြုလုပ် ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
(စကားချပ်။။ အထက်တွင် ဖော်ပြထား သော အစီအရင်များ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ ခင်းကျင်းကာ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း မိမိတို့ရဲ့ အကြံ အစည်များ ပိုမို ထမြောက်နိုင်ပါတယ်)
ထိုကဲ့သို့ ခင်းကျင်းပြီးပြီဆိုပါက မျက်လုံး မှိတ်ကာ တရားစတင်ထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ထိုင်နေချိန်သည် ဖယောင်းတိုင်မီးစာကုန်သည့် အချိန်အထိ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဖယောင်းတိုင်ကလည်း ခပ်သေးသေးမရပါ။ အနေတော် အနေအထားဆို ရပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်သည် မိမိသက်သောင့်သက်သာ ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံး မှိတ်လိုက်ပါက မိမိရဲ့ပါးစပ်မှ Bold Courage ဆို သော စကားလုံးကို တိုးတိုးလေး ရွတ်ဆိုရပါမည်။ ဖယောင်းတိုင် မီးစာကုန်သွားသောအချိန်တွင် မျက် လုံး ဖွင့်ကာ I am bold and courageous ဆိုပြီး မိမိရဲ့အသံကို မြှင့်ကာ ကိုးကြိမ်တိတိ ရွတ်ဆိုရပါ့မယ်။ ထိုနေရာမှာ မိမိတွင်ရှိသော အတွင်းပိုင်းစိတ်အင် အားနှင့် စိတ်သတ္တိများကို နိုးထစေနိိုင်ဖို့အတွက် ရွတ် ဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့စိတ်သတ္တိကို ပြန်နှိုး လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ နိုးထပြီးစီးသွားပါက မိမိသည် သက်သောင့်သက်သာသော အနေအထား ဖြင့် ထိုင်နိုင်ပါပြီ။ ထိုင်ပြီးပါက အနီရောင်ဖဲကြိုးလေး ကို ထုံးကာ မိမိရဲ့ဘက်ဘက်အကျီတွင် ကပ်ထားပါ။ အဆင်ပြေသလိုကပ်ပါ။ ဖဲကြိုးနီပုံစံလေးပဲ ထုံးရပါ မယ်။ ပြီးက သူယောင်ကျောက် ခေါ် နှင်းဆီ သလင်းကျောက်ကို ဘက်လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ညာ လက်ဖြင့် Archangel Ariel ဟု စာရေးရပါ့မယ်။ (မိမိသည် ဘယ်သန်ဖြစ်ပါက ညာလက်တွင် ကျောက် ကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ဘယ်ဘက်ဖြင့် ရေးနိုင်ပါတယ်) ရေးပြီးပါက ညာလက်ဖြင့်သာ စာရွက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး နေရှိရာအရပ်ကို မျှော်ကြည့်ကာ Ariel comfort me ဟု ရွတ်ဆိုပါ။ (၁၃)ကြိမ်တိတိ ပြင်းထန်သော အသံဖြင့် ရွတ်ဆိုပြီးပါက နေထွက်ရာ အရပ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်ကို ပြန်လှည့်ကာ မိမိရဲ့အိမ်သို့ ပြန်ပါ။ မိမိအိမ်အနီးတွင်ရှိသော သစ်ပင်တစ်ပင်တွင် အနီရောင် ဖဲကြိုးလေးကို ချိတ်ဆွဲရင်း သဘာဝ တရားတို့ရဲ့ အစောင့်အရှောက်ဖြစ်သော အေရီရယ် တမန်တော် ကျွန်တော်တို့အိမ် ကျွန်တော့်မိသားစုကို စောင့်ရှောက်ပေးတော်မူပါဟု ပြောဆိုရပါမယ်။ (အေရီရယ် တမန်တော်ရဲ့ ကူညီနိုင်သော အစိတ် အပိုင်းများကို အပေါ်တွင် ဖော်ပြထားပါပြီ။ ဉာဏ်ရှိ သလို ပြောဆိုကြပါ)
အေရီရယ် တမန်တော်အဆောင်ကတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေး ဝေငှ ပါရစေ။ ကျွန်တော်သည် အိန်ဂျယ်တို့နှင့်ပတ်သက် သော Enochian Magic များကို လေ့လာနေစဉ်မှာ အိန်ဂျယ်များရဲ့ ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်များနှင့် အကျိုး များကို ခံစားမိပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင် အွန်လိုင်း မှလည်း ကျွန်တော်အား မြောက်မြားစွာသော လူများက အစီအရင်အချို့တောင်းခံသဖြင့် အထက်ပါ အေရီရယ်အိန်ဂျယ်ပုံကို ပေးပို့ကာ အဆောင်ပြုလုပ် ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုသူမှာ သူ့တွင် အခက်အခဲများ တွေ့နေကြောင်း ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေကြောင်း အချစ်ရေးလည်း အဆင်မပြေ ကျန်းမာရေးကလည်း မကောင်း တော်တော်များများ အဆင်မပြေကြောင်း ပြောသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း အဆောင်ကတ်လေး ကို စာပြန်ပို့ရင်း ဒီအဆောင်ကတ်ကို ကြာသပတေး နေ့တွင် ကာလာပရင့်ထုတ်ပါ။ ပြီးပါက ပလတ်စတစ် လောင်းပြီး အထက်တွင်ရှိသော အကာကွယ်ဂါထာကို ရွတ်ဆိုခိုင်းပြီး အဆောင်ပြုလုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။ ထိုသို့ အဆောင်ပြုပြီး သုံးပတ်အကြာတွင် အရာ အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြောင်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နှင့် ယနေ့အထိ အခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း ဓာတ်ပုံ လေးကိုကိုင်ပြီး ဂါထာသက်စေ့ ရွတ်ဆိုပြီး အခက် အခဲများကိုလည်း ဆုတောင်းနေကြောင်းလည်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် ပြုလုပ်ပါက အေရီရယ်တမန်တော်က စောင့်ရှောက် ပါလိမ့်မည်။